35 Elaịhu gakwara n’ihu ịza, sị: 2 “Ọ̀ bụ ihe a ka ị na-ewere dị ka ikpe ziri ezi?Ị sịwo, ‘Ezi omume m karịrị nke Chineke.’+ 3 N’ihi na ị na-asị, ‘Olee uru ọ baara gị?+Olee uru m na-erite nke karịrị nke m ga-erite ma a sị na m na-emehie?’+ 4 Mụ onwe m ga-azaghachi gịNa ndị enyi gị+ bụ́ ndị gị na ha nọ. 5 Lelie anya n’eluigwe+ hụ,Leekwa ígwé ojii,+ na ha dị nnọọ elu karịa gị. 6 Ọ bụrụ na i mee mmehie, olee ihe i metere ya?+Ọ bụrụkwa na nnupụisi gị abaa ụba, olee ihe i metere ya? 7 Ọ bụrụ n’ezie na ị bụ onye ziri ezi, gịnị ka ị na-enye ya,Ọ̀ bụkwa gịnị ka ọ na-enweta n’aka gị?+ 8 Ọ bụ mmadụ ibe gị ka ajọ omume gị ga-emetụta,+Ọ bụkwa mmadụ ka ị ga-emeso ezi omume.+ 9 Ha na-akpọ òkù ka e nyere ha aka n’ihi ọtụtụ mmegbu a na-emegbu ha;+Ha na-eti mkpu enyemaka n’ihi ogwe aka nke ndị ukwu.+ 10 Ma ọ dịghị onye sịrị, ‘Olee ebe Chineke, bụ́ Onye Ukwu nke kere+ m, nọ,Onye na-eme ka e nwee abụ olu ụtọ n’abalị?’+ 11 Ọ bụ ya na-ezi anyị ihe+ karịa anụ ọhịa nke ụwa,+Na-emekwa ka anyị mara ihe karịa anụ ufe nke eluigwe. 12 Ha nọ n’ebe ahụ na-akpọku ya, ma ọ dịghị aza,+N’ihi nganga+ nke ndị ọjọọ. 13 Ma Chineke adịghị anụ okwu ụgha,+Onye Pụrụ Ime Ihe Niile adịghịkwa ahụ ya,+ 14 Ma ya fọdụzie mgbe ị sịrị na ị dịghị ahụ Chineke!+Ọ bụ n’aka ya ka ikpe dị, n’ihi ya, i kwesịrị iji ndidi chere ya.+ 15 N’ihi na iwe ya emeghị ka o nye gị ntaramahụhụ,+O tinyeghịkwa obi n’ihe i kwuru n’echeghị echiche.+ 16 Job na-asaghe ọnụ ya na nkịtị;Ọ na-ekwukwa ọtụtụ okwu nke amamihe na-adịghị.”+